Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan “Jawaari” iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Qaahira.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan “Jawaari” iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar halkaasi oo uu maalinnimada berrito ah uu ka furmi doono shirka madaxda Baarlamaannada dowladaha carabta.
Xildhibaan Daahir Xaaji Geelle oo ka mid ah Xildhibaannada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya u metella Baarlamaanka Carabta oo ka mid ah wafdiga Guddoomiyaha Baarlamaanka uu hogaaminayo oo faah faahin ka bixiyey safarka ayaa tilmaamay in Guddoomiye Jawaari uu ka qeybgalayo shirka madaxda Baarlamaannada carabta oo berri furmaya sidoo kalena uu kulammo gaar gaar ah la qaadan doono Guddoomiyeyaasha Baarlamaannada carabta ee shirka ka qeybgalaya
Boqortooyada Sacudiga oo dalbatay 50,000 oo qof oo Soomaaliyeed Qoraneysa
Boqortooyada Sacudiga oo dalbatay 50,000 oo qof oo Soomaaliyeed , Tiradan ayaa daba socota ka dhawaan markii ay dalbatay gabdho Soomaaliyeed oo shaqaale ugu noqda dadkeeda .
Tiradan ay dalbatay ayaa isugu jira Ciidamo , Miilatary , Dhakhaatiir, iwm . iyadoo albaabada u furi doonta boqolaal Soomaaliyeed oo doonayey inay Boqortooyada Sacuudiga mar uun ay cagta dhigaan nololna ka samaystaan .
Dawlada Sacuudiga waxaa ku furan hada dhibaatooyin badan oo ay ugu wayntahay dagaalka awooda badan ee u dhaxeeya Iran , Yemen , Shiicdaa iyo waliba cadaadiska ay ku hayaan wadama rer galbeedka , waxaa uu doonayaa inuu samaysto ciidamo Islaami oo uu ka soo kaxaysto wadamada Isaamka gaar ahaan kuw Sunniyiinta ah
Qoralkuna waa ka socdaa18 gobol ee somaliya caasimada ha sokmaliyaz waxss.laga qadi cidan badn lkn gobol"asta waxa laga qaadi 5,000oo askari hawshu Waa sida wararka Nagu soo garayaan.
Hadab ma Taageeri in Tirada intaa le'eg la siiyo Boqortooyada Sacuudiga , mase u qalantaa in loo golaaado .
MADAXWEYNAHA: Canshuurta Qaadka ayaanu Badinaynaa si Dadku ay isaga dhaafaan
Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh oo ka Qayb-galay maanta Barnaamij ay shacabka Soomaaliyeed su’aalo ku weydiinayeen ayaa sheegay in Qaadka/Jaadku uu Dhibaataooyin badan ku hayo Dadka Soomaaliyeed, ayna sameeyaan qorshe Bulshada looga wacyi-gelinno Qaadka iyo Dhibaatooyinkiisa.
Xasan Sheekh oo Hadal ka jeediyay Barnaamij loogu Magac-daray Daah-furka Dowladda ayaa intaas ku daray in meelo badan oo Dunida ka mid ah Qaadka laga mamnuucay, balse ka Dowlad ahaan ay sameynayaan Qorshe Shacabka looga Wacyi-gelinayo Dhibaatada uu Qaadka/Jaadku leeyahay.
“Go’aan ay dowladdu ku mamnuucayso Qaadka waxay u baahan tahay waqti badan, balse culummada iyo Bulshada Rayidka ah Waxaanan ka rabnaa inay door ka qaataan ka Wacyi-gelinta bulshada dhibaatada uu Qaadka/Jaadku leeyahay, Dowladduna waxay sameynaysaa inay lacagta ugu badan ee Canshuurta ah laga qaado Qaadka, si bulshadu Soomaaliyeed ay si sahlan u dhaafi lahaayeen Cunistiisa iyo gadashadiisa,” ayuu yiri Madaxweyne Xasan.
IS-AAMINKA SHACABKA IYO DOWLADDA; Madaxweynaha Somalia oo ka hadlay Aaminaada shacabka Soomaaliyeed ay aamisan yihiin Dowladdooda ayaa xusay inay tahay muhiim in shacabku ay ku kalsoonaadaan Mas'uuliyiintooda, wuxuuna intaas ku daray inuu Barnaamijka Daah-furka Dowladeed uu Qayb weyn ka qaadan karto in is-aamin iyo weliba isla-xisaabtanka dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
“Si aan Nidaam iyo Hab aan isku Aaminno u sameysano, Nidaamka Dowladnimada ayaa u baahan in la aamino, Shaqsiga amanta xilka haya berri wuu ka tagayaa, howshan maanta u joognana waa Tallaabada lagu sixi karo Nidaamka Dowlad-nimada,” ayuu Madaxweynaha Somalia ku daray hadalkiisa.
AMNIGA IYO MUSHAARKA CIIDANKA; Madaxweyne Xasan Sheekh oo Sidoo kale ka hadlay Arrimaha Ammaanka iyo Mushaaraadka Ciidanka Dowladda Somalia, ayaa yiri. “Arrinta Ammaanka iyo bixinta mushaaraadka ciidanka waa mid waajib ah, waa suuro-gal in mushaarka ciidanka uu dib u dhac ku yimaado, Laakiinse way naga go’an tahay bixinta Mushaarkooda, Maadaama ciidanka dowladda FS ay u taagan yihiin sidii ay cadowga uga difaaci lahaayeen bulshada.”
Isagoo sii hadlaya ayuu intaas ku daray. “Waxaan ka Cudur-daaranaynaa marka ay socdaan Hawlgalada cadowga lagu beegsanayo ay shacabka waxyeellooyin kasoo gaarto, mar kasta Dowladda Somalia waxaa ka go’an cirib-tirka cadowga Shacabka Soomaaliyeed.,”
GARSOORKA DALKA; Madaxweynaha oo hadlay Arrimaha Garsoorka ayaa sheegay in Nidaamka Dowladnimada ee 30-kii sano ee lasoo dhaafay lagu Dhaqmayay la bedelay, isla markaana la keenay Nidaam cusub oo Xukunku baahsan yahay, Taladu baahsan tahay uuna qorayo dastuurka in adeega garsoorka uu ka madax-bannaan yahay xukuumadda, sameynta guddiga ayaa waqti badan nagu qaadatay, balse hadda meel Wanaagsan ayay noo maraysaa howshaas.
MAQAAMKA MUQDISHO: Madaxweynaha Somalia ayaa sheegay in bulshada ku nool Gobolka Banaadir ay wax la qabaan Shacabka kale ee ku nool 18-ka gobol ee Somalia, isla markaana la sameyn doono Maqaamka u gaar ah oo ay caasimaddu yeelato.
“Gobolka Banaadir wuxuu ka mid yahay 18-ka gobol ee Waddanka, Gobol kastana xaqa ay shacabkiisu leeyihiin ayay leeyihiin shacabka gobolka Banaadir ku nool, laakiin Muqdisho waa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya, Maqaam gaar ah ayay yeelanaysaa, Inkastaoo aanu weli Diyaarsanayn Maqaamkaas. Dowlad Goboleedyada Somalia Qaarkood Dadka ku nool, Waxaa ka tiro badan kuwa caasimadda ku nool, in xuquuqdooda la duudsiiyo xaq ma ah, Waxaa socda qorshe ah in la sameeyo Gole deegaan, Bulshadana ay isu abaabusho sidii ay isku soo dooran lahaayeen,” ayuu Xasan Sheekh kusoo Gunaanaday Hadalkiisa.
Ugu dambeyn, Waa markii ugu horreysay oo Madaxweynaha Soomaaliya uu si toos ah uga hadlo Qaadka/Jaadka iyo Dhibaatooyinka uu ku hayo Bulshada, iyadoo la Ogsoon yahay in Qaadku uu nooga yimaado dalka Kenya, dhaqaale badanna uu ku baxo.
Daawo sawiro:Fadeedax:C/wali Gaas Oo Tuuray Calanka Soomaaliya”Iyo Wixii Ka Dhacay itoobiya Ee lagu Qaciyay!!!
Hogaamiyaha SSDF C/weli Maxamed Cali (Gaas) oo ku sugan dalka Itoobiya ayaa ka tegay calanka Soomaaliya oo qaatay calanka SSDF, waxaana la arkayay calanka Itoobiya iyo kan SSDF oo is barbar yaala goobo uu booqday C/weli Gaas oo isugu jira shirkado iyo kaabayaal dhaqaale oo Itoobiya leedahay.
Arrinta la yaabka leh ee meesha ka muuqata waa in SSDF u dhaqantay sida dowlad ka madax bannaan Soomaaliya iyadoo Itoobiyana ay u sahashay rabitaankaasi, taasoo fadeexad ku ah shaqsiyadda Gaas oo noqdey Ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya.
Waxaa laga yaabaa wafdiga SSDF ee Itoobiya ku sugan inay sharaf u arkaan arrintan halista ku ah qaranimada Soomaaliya oo soo baxday xilli ay C/weli Gaas hore u sheegay inay furan tahay inay Soomaaliya ka go’aan…!! Waxay sidoo kale tani caddeeneysaa damaca Ethiopia ee ah dowlado tiro-badan oo Soomaaliya kasoo baxa.
Deg Deg:Dawlada Maraykanka Oo Soomaaliya Ku Dartay Wadamo Ay Walaac Ka Muujisay Isku Socodkooda?
Waaxda Ammaanka Gudaha Maraykanka ayaa shaacisay inay dalalka Somalia, Yemen iyo Libya u aqoonsadeen Waddamadda laga walaacsan yahay “countries of concern”, tallaabo la xiriira dhinaca Bixinta Fiiso-dhaafitaanka ee Maraykanka.
Waxaa la sheegay in dadka booqday dalalkaasi shantii la soo dhaafay in lagu adkeynayo Dal-ku-galka Maraykanka ee Barnaakijka Dhaafitaanka Fiisaha.
Xayiraadan cusub ayaa la soo rogay, kadib, Sharciga la ansixiyey wixii ka dambeeyey Weerarkii Kooxda Daacish ka geysteen caasimadda dalka Faransiiska ee Paris bishii November ee sannadkii hore.
Muwaadiniinta dalalka Isbahaysiga la ah Maraykanka ee doonaya inay u soo socdaalaan dalak Maraykanka ee aan haatan heli karin Fiisaha waxay ka codsan karaan Qunsulliyadaha Maraykanka haddii ay horey ugu safreen dalalka Somalia, Libya iyo Yemen shantii sanno ee lasoo dhaafay.
Waaxda Ammaanka Gudaha Maraykanka waxay sheegtay in Shuruudahan cusub inaysan si toos ah u waxyeelayn doonin Muwaadiniinta ka imaanayo dalalka Fiiso Dhaafitaanka ee haysta Labada Dhalasho ee dalalka Yemen, Somalia iyo Libya.
Dhinaca kale, Waaxda Ammaanka ee Maraykanka waxay sheegtay inay kala shaqeyn doonaan Waaxda Arrimaha Dibedda iyo Agaasimaha Sirdoonka Qaranka si loo go’aamiyo haddii ay jiraan dalal dheeraad oo lagu darayo Liiskaasi.
Maraykanka waxaa horey looga mamnuucay dadka u dhashay dalalka Iran, Iraq, Sudan iyo Syria ee doonaya inay u soo socdaalaan dalka Maraykanka.
Ugu dambeyn, Ma ahan markii ugu horreysay oo dilal noocan ah ay ka dhacaan deegaanno ka tirsan maamulka Puntland, kuwaasoo inta badan lagu beegsado mas'uuliyiinta Puntland, culumada iyo dad kale ee howlaha muhiimka ah u haya bulshada.
Madaxweynaha DFS oo Muqdisho kula kulmay ku xigeenka Xoghayaha Guud ee QM
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sh. Maxamuud ayaa maanta xarunta Madaxtooyada Somalia kula kulmay, Ku-xigeenka Xog-hayaha Guud ee QM ee Arrimaha Siyaasadda, Jeffrey Feltman oo maanta booqasho ku yimid Muqdisho.
Xasan Sheekh ayaa danjiraha uga mahad-celiyay booqashada uu ku yimid dalka, taasoo uu ku tilmaamay inay muhiim u tahay Somalia oo qaadaysa tallaabooyin taariikhi ah oo isugu jira dhinacyada Siyaasadda iyo Dib u qaabeynta Mustaqbalka Dalka la xiriira.
Sidoo kale, Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa Xusay in Somalia ay si Tartiib-tariib ah u soo kabaneyso, taasoo uu sheegay inay ku timid Wada-shaqeyn iyo wada-xaajoodyo Muhiimka ah oo dhex-maraya Soomaalida.
“Wax badan ayaa noo Qabsoomay, wax baddana way noo dhiman yihiin. Waxaan Xoogga saarnay Saddex Arrimood oo Laf-dhabar u ah dib u dhiska Soomaaliya. kuwaas oo kala ah; Hannaan Siyaasadeed oo loo dhan yahay, Arrimaha Ammaanka oo Golaha Nabad-galyada Qaranka oo aan kusoo darnay maamullada dalka ka jira iyo qaybsiga kheyraadka. Dhanka kalena aad baan uga mahad-celinayaa Qaramada Midoobay oo door-weyn ku leh dib u soo kabashada dalkeenna, Anigoo rajeynaya inay sii wado taageerada ay inoo fidiso,” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweynaha Somalia ayaa sidoo kale ka warbixiyay baahida loo qabo isku dubba-ridka iyo tayeynta hawl-gallada AMISOM iyo Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya ee ka dhanka ah kooxaha Argagixisada, sida Al-shabaab.
Danjire Feltman ayaa isagana dhankiisa ugu horreyn Madaxweynaha iyo Dowladda FS ku Amaanay go’aankii dhawaan ay qaateen ee Meel-marinta nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta sanadkan, isagoo xusay inay talaabadaas taageereen, si weyna ay u soo dhoweeyeen Waddamada Gobolka, Caalamka iyo Qaramada Midoobay.
Waxaa, sidoo kale Madaxweynaha iyo Danjire Feltman ay ka wada-hadleen shirka ka dhici doona magaalada Istanbul ee dalka Turkiga dhamaadka bishan Feberaayo ee 2016-ka ee ay isugu imanayaan Soomaaliya iyo Waddamada Is-kaashiga la leh.
Arrimaha kale ee ay kawada hadleen waxaa ka mid ah kulan kale oo ka dhacaya magaalada Jabuuti oo ay isugu imaan doonaan Madaxda dalalka ay ciidamadu ka joogaan Somalia iyo sidii dhallinyarada Soomaaliyeed loogu abuuri lahaa xarumo ay ku bartaan mihnadaha kala duwan, loona heli lahaa Maal-gashiyo u sahli kara fursado shaqo.
Danjire Feltman ayaa mar kale xusay inay QM si buuxda u taageereyso Somalia, Wuxuuna shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay si wadajir ah uga shaqeeyaan dib u soo kabashada dalkooda, kana faa’iideystaan kaalmada Beesha Caalamka. Iyadoo Kulankan waxaa Goob-joog ka ahaa Mas'uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka Somalia & Qaramada Midoobay.
Safiirka Jarmalka oo Madaxweynuhu uu Maanta ka Guddoomay Warqadihii Aqoonsiga
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sh. Maxamuud ayaa maanta waraaqihii aqoonsiga danjirenimo kaga guddoomay danjiraha cusub ee Dalka Jarmalka, isla markaana wakiilka uga noqonaysa Somalia, Jutta Gisela Frasch.
Danjire Frasch ayaa warqadaha aqoonsiga ka sokow, waxay Madaxweynaha soo gaarsiisay dhambaal ay kaga siday Ra’iisul Wasaaraha dalka, Jamarlka Angela D. Merkel.
Sidoo kale, Madaxweyne Xasan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal, isagoo Danjire Frasch uga waramey xaaladda dalka Soomaaliya iyo dhinacyada ay labada waddan ka iska kaashan karaan.
Xasan Sheekh ayaa sidoo kale Danjiraha Jarmalka u sheegay in Somalia ay u furan tahay maalgashi si loo kobciyo dhaqaalaha dalka, dhanka kalena uu rabo in lasoo nooleeyo bar-naamijyadii Mihnadaha ee Jarmalka uu Somalia ka taageeri jiray si Fursado shaqo loogu abuuro dhalinyarada.
Danjire Frasch, ayaa iiyadana sheegtay in Somalia uu muhiim u yahay Caalamka, iyadoo sidoo kalena soo dhoweysey horumarka dhanka siyaasadda ee dhowaan Soomaaliya ay ku tallaabsatey markii la meel mariyay nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta Sannadkaan 2016-ka.
Waxay Danjire Frasch sheegtay in Jarmalka gacan ka geysan doono taageerada dhismaha booliska, xarumo lagu Tababbaro Dhallinyarada dhaqan-celinta lagu sameynayo ee kasoo goosta Al-shabaab, iyo Hir-gelinta Adeegyada Aas-aasiga ee sahlaya dib u soo noqoshada qoxootiga Soomaalida ee ku jira xeryaha qaxootiga ee waddamada deriska ah.
Dhanka kale, Dowladda Jarmalka ayaa dib u fasaxayaa malaayiin Doollar oo horay loogu deeqay Soomaaliya burburka ka hor, lacagtaas oo haatan loo adeegsan doono horumarinta mashaariic kala duwan oo laga hirgelin doono gobollada Somalia.
Labada wadan ayaa sidoo kale ka wadahadley sidii la isaga kaashan lahaa adeegyada wax-barashada, caafimaadka, biyaha & kuwa kale aasaasiga u ah dib u soo kabashada Somalia.
Ugu dambeyn, Madaxweynaha Somalia ayaa sheegay in xiriirka is-kaashi ee Somalia kala dhexeeya waddanka Jarmalka uu gacan weyn ka geysan karo dib u dhiska waddanka.
Diyaaradihii Imaan jiray Garoonka Diyaaradaha Muqdisho oo Intooda badan Maanta baaqday
Diyaaradihii Caalamiga ahaa ee Garoonka Aadan Cadde ee Magaalad Muqdisho imaan jiray dagi jiray ayaa intooda badan maanta baaqday, kaddib qarax shalay ka dhex dhacay diyaarad ay lahayd shirkadda Daallo Airlines, taasoo baaritaankeeda uu weli socdo.
Wararka ayaa sheegaya in Diyaaradda Turkish Airlines oo joogo u imaan jirtay Garoonka Diyaaradaha Muqdisho maalin kasta ayaan iman saddexdii casho ee lasoo dhaafay, iyadoo aan la ogeyn illaa sababta ay Duullimaadyadii ay maalin walba ku imaan jirtay Garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Sidoo kale, Wararka intaas ku daraya in diyaaraddii Daallo Airlines ee shalay uu ka dhacay Qaraxa ay wadday 74-rakaab ah oo ay Muqdisho ka qaadi lahayd Qaadi lahayd Diyaaradda Turkish Airlines, Taasoo la sheegay inay Jabuuti kasii qaadi lahayd, iyadoo Mas'uuliyiinta Duulista Hawada ee Dowladda Somalia ayaa Xusay inaysan ogeyn sababta ay Muqdisho u iman weyday Turkish Airlines dhowrkii maalmood ee u dambeeyay.
DAAWO: Diyaaraddii DAALLO Airlines ee uu shalay Qaraxu dhexdeeda ka dhacay;
Agaasimaha Hay'adda Saadaasha Hawada iyo Duulista Somalia, C/wahaab Sheekh Cumar ayaa sheegay inay weli socdaan baaritaanno ku saabsan shilkii shalay qabsaday diyaaraddii Daallo Airlines, muddo dhowna ay soo saarayaan warbixin ku saabsan shilkii dhacay.
Waxaa kaloo wararku ay sheegayaan in baaritaanka shilkan ay wadaan khuburo dowladda Somalia ka tirsan iyo hay'adaha dhanka ammaanka ka shaqeeya, iyadooo baaritaanka lagu sameynayo diyaaradda, qofkii ka dhacay iyo weliba waxyaabo kale oo la xiriira baarista.
Inkastoo hay'adaha amniga DF Soomaaliya aysan weli kasoo saarin warbixin dhameystiran Shilkii ka dhacay Gudaha Diyaaradaha Daallo Airlines ee dib ugu soo laabtay Muqdisho; ayaa haddana wararka hoose waxay sheegayaan inuu ahaa shilku uu ahaa mid qarax ah oo gudaha diyaaradda ka dhacay.
Ugu dambeyn, Ruux ka Dhacay Diyaaradda oo Rakaabka ka mid ahaa ayaa laga soo Helay Meydkiisa meel ku dhow degmada Balcad ee Gobolka Shabeellada Dhexe, kaasoo la xusay inuu fadhiyay qaybta uu qaraxu ka dhacay, waxaana meydkiisa lasoo gaarsiiyay Muqdisho.
Muuqaal+Warbixin: Nin ka soo dhacay diyaaradii Daallo ee Qaraxa lagu xidhay oo meydkiisa Shalay laga helay Balcad
Muqdisho (Kalshaale) Nin la sheegay inuu kasoo dhacay diyaaraddii Daallo Airlines ee uu maalintii shalay uu Hawada ku qaraxday, kadib markii ay ka duushay Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Ninkan ayaa la sheegay inuu ku soo dhacay dhul beereed ku taala Deegaanka Qiiqaale oo saaran wadada xidhiidhisa Degmooyinka Balcad iyo Afgooye ee Gobolada Shabellaha Dhexe iyo Shabellaha Hoose. Deegaanka Qiiqaale waxa uu deegaan ahaan ka tirsan yahay Degmada Balcad.
Gudoomiyaha Degmada Balcad, Maxamed Maxamuud Saneey ayaa waxa uu warbaainta u sheegay inay gacanta ku hayaan meydka ninkaasi, kaasoo uu sheegay inuu si xun ugu gubtay jirkiisina ugu goo-go’ay qaraxii ka dhex dhacay gudaha diyaaradda.
Gudoomiyaha ayaa sheegay inay xiriir la soo sameeyeen hay’adaha amniga ugu sareeya ee Dowladda Federaalka, isla-markaana ay diyaar u yihiin inay ku wareejiyaan meydka ninkaasi.
MUUQAAL: Qurba-joogtii ka badbaaday Qaraxii Diyaarada Daallo oo ka hadlaya Wixii qabsaday iyo Siday u argagaxeen
Muqdisho (Kalshaale) Diyaaradda Daallo Airlanes oo 74 qof oo rakaab ah ka qaaday Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde, oo kusii jeeday Magaalada Djibouti, ayaa Mudo kooban kadib uu dhacay Qarax, Iyadoonta si deg deg ah loogu soo celiyey Garoonka Muqdisho.
Qurbajoogtii Soomaaliyeed ee Saarnaa Diyaarada ayaa ka warbixiyey wixii dhacay“Waxaan ku socday Dalka Sweden, waxa dhacay waxay ahaayeen wax la yaab leh, Markaan kusii dhowayn Jowhar ayaa Diyaarada Qarax ka dhacay, Waxaana Taas nooga darnayd afar Saacadood oo Jaahwareer ah oo nagalu haystay Garoonka dhexdiisa”“Waxaan maqalnay Qarax xoogan, Anigu waxaan fadhiyey Qaybta danbe ee Diyaarada, dadkii oo dhan way wada kaceen, kaidb waxaan lasoo baxnay (OXYGEYN-ka) waxaana naloo sheegay in diyaarada la dejin doono
Kenya oo sheegtay in ay dishay dagaalyahanno ka tirsan Al-shabaab
Dowladda Kenya ayaa sheegtay maanta in Afar Ruux oo looga shakisan yahay inay Al-shabaab ka tirsan yihiin ay ku dileen deegaanka kaynta badan ee Boni, kuwaasoo ay sheegeen in ay horay u Afduubeen gaari ay leeyihiin booliisku iyo khasnado hub ah.
Afhayeenka millateriga dalka Kenya, Col. David Obonyo ayaa sheegay in gaarigaan ay soo bandhigeen ciidamada amniga Kenya ee ku sugan deegaanka dhirta badan ee Boni, halkaas oo la sheegay inay xarumo ku leeyihiin dagaalyahanno ka tirsan Al-shabaab.
“Gaarigan waxaa lasoo afduubay bishii December ee sannadkii hore2015-ka, waxaana laga Qabsaday Deegaanka Milihio oo ku dhow Laamu,” ayuu yiri Col. Obonyo oo Warbaahinta Kenya la hadlayay Salaasada maanta ah.
Sidoo kale, Col. David Obonyo ayaa sheegay in xoogaggan la dilay laga furtay afar qori oo AK-47 ah, saddex Bam-booyinka Qarxa ah, Rasaas fara badan iyo qalab kale oo ay Adeeg-sanayeen.
Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada ammaanka ay Warbixinno la xiriira in Gaariga lagu arkay deegaanka Boni ee kaynta badan; halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamo Kenyan ah si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa xoogaga Al-shabaab ee ku sugan deegaankaas.
“Ciidammo ka tirsan kuwa Amaanka Kenya oo howlgallo ka waday Soohdinta Somalia iyo Kenya u dhexeysa, ayay isku dhaceen kooxahan oo gaariga soo afduubay, kaddibna waxay toogteen Afar ka mid ahaa Al-shabaab, Halka laba kalena ay baxsadeen iyagoo dhaawacyo qaba,” ayuu hadalkiisa ku daray, Col. Obonyo.
Howlgalkan ayuu Afhayeenku sheegay in Ciidamada Booliisku waxay soo furteen Gaariga oo noociisu ahaa Ford Ranger iyo rasaas saarnay, isagoo hadalkiisa ku daray in kooxo kale oo Al-shabaab ka tirsanna ay u carareen dhanka deegaanka kaynta badan ee Boni.
Dhanka kale, Col. David Obonyo ayaan sheegin khasaaraha dhankooda kasoo gaaray iska-horimaadkii ay la galeen ciidamada Al-shabaab ee uu sheegay inay gaariga iyo hubka kale ka furteen.
Ugu dambeyn, Al-shabaab ayaan weli ka Hadlin dilka ay dowladda Kenya xustay inay ku dileen iska-horimaad ka dhacay deegaanka Boni afar ka mid ah xoogagga iyaga taabacsan ee ku sugan deegaankaas.
Jen Cali Gaab oo faah faahin ka bixiyay madaafiicdii lagu weeraray shalay agagaarka xarunta madaxtoyada
Taliyaha ciidammada booliiska gobolka Banaadir Gen.Cali Xirse Barre Cali Gaab ayaa ka hadlay madaafiic qasaare geysatay oo shalay ku dhacday meel aan ka fogeyn dhismaha madaxtooyada ee magaalada Muqdisho.
Gen Cali Xirse Barre Cali Gaab ayaa sheegay in madaafiicdaasi laga soo tuuray gudaha degmada Warta-Nabada ama Wardhiigley ayna ku dhaceen isla degmada Warta-Nabadda.
Taliyaha Booliska Gobolka Banadir Cali gaab ayaa intaa ku daray in Madaafiicda dadka soo tuuray ay wateen gaari Nooho ah ayna xirnaayeen tuutaha Milatariga Soomaaliya.
“Waxaan ogaanay dadka ka dambeeyay weerarka gaariga ay wateen waxaan rajeyneynaa in aan soo qabano oo aan sharciga horkeeno.”ayuu yiri taliyaha ciidamada Booliska gobolka Banaadir.
Taliyaha ayaa intaa ku daray in ciidammada booliiska ay baaritano ku hayaan dadkii ka dambeeyay madaafiicda lagu soo tuuray agagaarka madaxtooyada.
Ma aha markii ugu horeysay ee ciidamada Boolisku sheegaan inay baaritaano ku hayaan dad ka geystey dambiyo magaalada Muqdisho.
WARGEYSKA THE STAR:- Kenya waxay soo iibsatay gaadiidka dagaalka oo nooc casri ah Soomaaliya ayayna ku wajahan yihiin
Sida uu shaaciyay wargeyska Thestar oo kamid ah wargeysyada afka dheer ee kasoo baxa magaalada Nairobi,Kenya waxay soo iibsatay 30 gaadiidka dagaalka oo nooc casri ah kuwaas oo sida wargeysku sheegay loo qaybin doono booliska ka hawlgala deegaanada ay ku badan yihiin weerarada Alshabaab.
Madaxweynaha Kenya ayaa horay ubalan qaaday in booliska dalka ku xoojin doono diyaarado iyo gawaadhi gaashaaman si waajibaadkooda ugutaan.
“Qof walba oo Somali ah Mas’uuliyad ayaa ka saaran Dhismaha Dalkooda, Waayo iyagaa iska leh, Dalku haddii uu dumay; iyagaa gacnahoda ku dunsaday, Annaga dalkaan joognay Dadka Soomaalida mid qori tuuraya mid Xabbad ridaya iyo mid Qalbka ka Jecelaa ayaa la ahaa, marka maanta waan garanay inaan qaldannay waana kasoo noqonay, ciidamadeenna iyo dalkeenna inaan dhisanno - innagaa nalaga doonayaa, Mas’uuliyaddana innagaa leh oo eedda yaan dad kale saarin,’’ ayuu yiri Xasan Sheekh.